राजनीति Archives - Page 125 of 137 - Dna Nepal
कास्कीमा ९ पदका लागि १ सय १ उम्मेदवार १७ कार्तिक २०७४, शुक्रबार ०३:४७
प्रकाश ढकाल पोखरा, कार्तिक १७ । दुई ठूला शक्ति नेपाली काँग्रेस र वाम गठबन्धन सहित विभिन्न दलका उम्मेदवारले कास्कीमा मनोनयन दर्ता गरेका छन् । बिहिबार मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर प्रतिनिधी सभा र प्रदेशसभाका लागि मनोनयन..
प्रकाश ढकाल पोखरा, कार्तिक १७ । देशैभर बागीको तनाव ब्यहोरेको काँग्रेसलाई कास्कीमा पनि बागीकै चिन्ता छ । पार्टीबाट टिकट नपाएपछि केही नेताहरु स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका छन् भने केही नेताहरु भर्खरै सुरु भएको नेपाली काँग्रेस बीपीको नामबाट..
कास्कीमा माओवादी उम्मेदवार विरुद्ध एमालेको बागी
पोखरा, कार्तिक १७ । एमालेबाट प्रभावशाली नेता नै बागी उठेका छन् । कास्की क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा (क) अन्तर्गत वाम गठबन्धनका माओबादी उम्मेदवार दिपक कोइराला विरुद्ध टिकाराम पगेनीले बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । उनी एमालेबाट सीफारिसमा..
कास्कीमा दुई मन्त्रीको घम्साघम्सी १६ कार्तिक २०७४, बिहीबार ११:५४
प्रकाश ढकाल पोखरा, कार्तिक १६ । कास्की क्षेत्र नम्बर १ जिल्लामै बढी चासोको क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा पूर्व मन्त्री र बहालवाला मन्त्री आमनेसामने हुँदैछन् । वाम गठबन्धनले पुर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीलाई टिकट दिएको छ भने नेपाली..
कास्कीमा टिकटका भाग्यमानी १५ कार्तिक २०७४, बुधबार १९:३३
प्रकाश ढकाल पोखरा, कार्तिक १६ । जिल्लाबाट सिफारिस भएको झण्डै १ महिनापछि दलहरुले कास्कीका लागि आफ्ना उम्मेदवार छनौट गरेका छन् । वाम गठबन्धनले केही उम्मेदवार पछिल्यै छानेको भएपनि अन्तिम टुंगो बुधबार मात्रै लगाएको हो भने काँग्रेसले सबै..
कास्कीमा काँग्रेसबाट कसले पाए टिकट ?
पोखरा, कार्तिक १५ । लोकतान्त्रीक गठबन्धनको तयारी गरिरहेको नेपाली काँग्रेसले मंगलबार क्षेत्र नम्बर १ को मात्रै उम्मेदवार टुंग्याएको छ । प्रतिनिधीसभामा कानुन मन्त्री समेत रहेका सांसद यज्ञ बहादुर थापा उम्मेदवार बनेका छन् । दुवै संविधानसभामा..
कास्कीमा एमाले र माओवादीले उम्मेदवार टुंग्याए
प्रकाश ढकाल पोखरा, कार्तिक १५ । आगामी मंसिर २१ गते हुने दोश्रो चरण अन्तर्गतको चुनावका लागि कास्कीमा उम्मेदवार टुंगो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मनोनयन दर्ता गर्ने समय एकदिन मात्रै बाँकी छँदा वाम गठबन्धनले लगभग उम्मेदवार टुंग्याईसकेको छ भने..
यसरी भयो प्रदेश ४ मा वामको सीट बाँडफाँड १४ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०३:३८
पोखरा, कार्तिक १४ । प्रदेश ४ का जिल्लामा वाम गठबन्धनले उम्मेदवार बाँडफाँटको टुंगो लगाएको छ । उम्मेदवार छनोट कार्यदलको निर्णयबाट प्रदेश ४ का सबै जिल्लामा सीट बाँडफाँड गरेको हो । कार्यदलको निर्णयअनुसार ४ नम्बरमा प्रतिनिधि सभाका १३ सिट एमालेको..
कम्युनिजम विश्वमै टिक्दैन–भट्टराई
पोखरा, कार्तिक १४ । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक तथा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ का प्रत्यक्ष उम्मेदवार डा. बाबुराम भट्टराईले पूरानै शैलिका कम्युनिष्ट पार्टीहरु विश्वबाटै विलय हुने दावी गरेका छन् । पोखरामा बसोबास गर्ने गोरखाली समुदायसँग सोमबार..
बाबुराम भट्टराई पोखरा आउँदै १३ कार्तिक २०७४, सोमबार ०१:३५
पोखरा, कार्तिक १३ । नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक तथा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधीसभा सदस्यतर्फका प्रत्येक्ष उम्मेदवार डा. बाबुराम भट्टराई सोमबार (आज) पोखरा आउने भएका छन् । पोखरामा रहेका गोरखाली समुदायसँग भेटघाट र आफ्ना चुनावी योजनाबारे..